Xog: Xiisadda Gedo oo loo helay xal laba qodob ah iyo wararkii u dambeeyey shirka - Caasimada Online
Home Warar Xog: Xiisadda Gedo oo loo helay xal laba qodob ah iyo wararkii...
Xog: Xiisadda Gedo oo loo helay xal laba qodob ah iyo wararkii u dambeeyey shirka
Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Shirka wada-tashiga ee ka socda magaalada Dhuusamareeb, ayaa heshiis horudhac ah looga gaaray arrinta gobolka Gedo oo xuddun u ah khilaafka ka dhashay doorashada dalka ee 2021-ka.
Madaxda dowladda federaalka, Dowlad goboleedyada iyo Gobolla Banaadir ayaa is-faham bilow ah ka gaaray xiisada gobolka Gedo oo muddooyinkii dambe ay xiisad xoogan ka taagneyd, waxyna heleen xal ay ku wada qanci karaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland, sida ay ilo xog-ogaal ah u sheegen Caasimada Online.
Dhinacyada ku shiraya Dhuusamareeb ayaa isla gartay laba qodob oo la rumeysan yahay inay xal u noqon karaa xiisadda Gedo, taasi oo dowladda federaalka iyo Jubaland ay wada aqbali karaa.
Arrinta Gedo ayaa waxaa xalkeeda loo saaray Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada Puntland, Galmudug, Koofur Galbeed iyo HirShabelle, si ay xal buuxa uga gaaraan, waxayna soo jeediyaan in arrintan lagu xaliyo qodobada hoose.
1- In Ciidamo Boolis AMISOM la geeyo Garbahaarey, oo ah magaalada labaad ee Jubaland ee doorashada ay ka dhaceyso, si labada dhinacba aysan awoodda doorashada u yeelan.
2- In Guddiga Doorashada Jubbaland la geeyo Garbahaarey, si doorashada ay halkaas uga qabtaan, ayadoo amnigood ay sugayaan AMISOM.
Dhinaca kale, madaxweynaha maamulka Jubbaland, Axmed Madoobe ayaa sidoo kale doonaya in maamulka gobolka Gedo ee Jubaland lagu celiyo Garbahaarey, gaar ahaan duqa magaalada, taasi oo meesha ka saareysa maamulka ay dowladda federaalka u sameysatay gobolkaas.
Xiisada gobolka Gedo ayaa u muuqata in xalkeeda la helay, waxaana la rumeysan yahay in haddii dalabka Axmed Madoobe ee Garbahaarey la aqbalo la saxiixan doono heshiiskan is-afagaradka ah.